Home Maqaallo Shirka Urur Gobolleedka IGAD oo maanta la filayo in uu ka furmo...
Shirka Urur Gobolleedka IGAD oo maanta la filayo in uu ka furmo magaaladda Addis Ababa
Wasiirro arrimo dibaddeedka ku jiray Urur gobolleedka IGAD ayaa lagu wadaa in maanta uu shir uga furmo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, iyadoo kulanka looga wada hadli doono heshiiska dowladda iyo Mucaaradka Koonfur Sudan iyo xaalada Soomaaliya.
“Shirka waxaa looga wada hadlayaa Qorshaha Heshiiska Dib-u-heshiisiinta ee Heshiiska Khilaafka Koonfurta Sudan iyo horumarka Soomaaliya,” ayaa lagu yiri war ka soo baxay IGAD shalay.
Gaar ahaan Wasiirrada ayaa ka wada hadli doono qorshaha amniga magaalada Jubba ka hor inta uusan halkaa ku laaban hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas Mr Machar oo dalka isaga cararay bilowgii bishii July sanadkii 2016ka.
Soomaaliya waxaa shirkan ku matalaya Wasiirka Wasaarradda arrimaha dibedda Axmed Cawad Ciise oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Previous articlewararkii ugu dambeeyay Al-shabaab iyo Ciidamada Galmudug oo ku dagaalamay Galgaduud
Next articleVilla Somalia oo shaacisay Go’aan lagu degdegay!!